रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा फैक्ट्री
घर सजावट भिर्मन ब्लाइन्ड्स कपडा सेमी ब्ल्याकआउट
नयाँ डिजाइन थोक भर्या Lad भर्याder टेप शgri्ग्री-ला ब्लाइन्ड्स एफ ...
घर सजावट क्षैतिज शांग्री-ला ब्लाइंड कपड़ा अर्ध-बी ...
ट्रिपल शेड शान्ग्री-ला रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा रेसको लागि ...
घर सजावट ड्युअल इन्द्रेणी ब्लाइन्ड्स कपडा अफिसका लागि
चीन सजावट गोपनीयता जेब्रा ब्लाइन्ड कपडा अफिस वाई को लागी ...
बहु रंगीन डबल लेअर ब्लाइन्ड्स कपडा १००% पॉलिएस्टर
इन्द्रेणी रोलर ब्लाइन्ड्स डे-नाईट-जेब्रा पर्दा शेड्स ...
ब्ल्याकआउट जेब्रा डे र नाइट इन्द्रेणी डुओ ब्ल् ... प्रिन्ट गर्दै।
चीन रोलर ब्लाइन्ड्स डे र नाइट शेड्स पार्ट कॉम ...
चीन अफिस साइड साइड कस्टम सनस्क्रीन जेब्रा अटो ...
चीन मेशिन मेनल्याण्ड फक्स लिनन जेब्रा डुअल दिन र ...
चीन विन्डोज सन शेड पॉलिएस्टर सनस्क्रीन रोलिंग ...
सटर विन्डो सनस्क्रीन पैटर्नयुक्त वसन्त रोलर बली ...
चीन विन्डोज सन शेड पॉलिएस्टर रोलिंग मोटर चालित ...
आउटडोर म्यानुअल विन्डो शटर आधा शेड डुअल लेयर ...
चीन ब्लाइन्ड्स फैक्टोबाट सनस्क्रीन कपडा निर्माण ...
अध्ययन घाम फिल्टरिंग वाणिज्यिक सनस्क्रीन रोलर ...
अनुकूलित चौड़ाई चीन विन्डोज सजावट पर्दा को ...
चीन निर्माता सनस्क्रीन रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा सु ...
आरको लागि थोक एन्टि-यूभी फाइबरग्लास सनस्क्रीन कपडा ...
नि: शुल्क नमूना सेमी ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा
इको-मैत्री रोलर फैब्रिक पॉलिएस्टर सेमी ब्ल्याकआउट
ब्लाइन्ड्स निर्माता रोलर ब्लाइन्ड्स सेमी ब्ल्याकआउट एफए
Sunetex सेमी ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा शीर्ष गुण र राम्रो वर्णहरूको साथ १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। डबल अनुहार र color्ग गोंद कोटिंग विधिको साथ यसले प्रकाश र व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षा राख्नमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। राम्रो गुणस्तरको पॉलिएस्टर सामग्रीले यसलाई टिकाऊ बनाउन सक्दछ, कुनै मोल्ड, कुनै पतंग, कुनै विरूपण, लामो समय उपयोग पछि कुनै ट्र्याक।
Sunetex रोलर ब्लाइन्ड ब्ल्याकआउट कपडा हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ, यो एक उच्च पुन: खरीद दर छ। हाम्रो उत्पादनहरू राम्रो गुण र अनुकूल मूल्यमा छन्। हामीसँग तपाईंको लागि कम MOQ छ। त्यसोभए, तपाईंको परिमाण ठूलो वा सानो भए पनि हामी तपाईंको साथ व्यापार गर्न सक्दछौं। राम्रो गुण र उत्तम सेवाका साथ हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी तपाईंको लागि कडा आपूर्तिकर्ता बन्न सक्दछौं। र हाम्रो पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई गुणवत्ता र रंग जाँच गर्न नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
चीन सजावट गोपनीयता रोलर ब्लाइंड कपड़ा अर्ध कालोआउट
Sunetex Jacquard अर्ध-ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा धेरै प्रतिस्पर्धी छ। यो सुन्दर र फेसन हो। डबल फेस डिप कोटिंग विधिको साथ, हाम्रा उत्पादहरू अर्ध-ब्ल्याकआउट छन्। हाम्रो कपडा पारदर्शी छ, जसले तपाईंको कोठा लाई प्रकाश बनाउन सक्छ। यसका साथै तपाईं दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ किनकि यो अर्ध कालोआउट हो। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारका कपडाहरू छन्। हाम्रा सबै उत्पादनहरू राम्रो गुण र उचित मूल्यमा छन्।
हाम्रा उत्पादनहरूले हाम्रा उत्पादनहरूमा उच्च पुन: खरीद दरको आनन्द लिन्छन्। हामी अन्धा कपडामा एक पेशेवर निर्माता हो। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, तिनीहरूलाई उत्पादन गर्न it० दिनको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंको अर्डर सानो छ, चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग तातो बिक्री हुने वस्तुहरूको लागि सामान्य स्टक छ। हामी वस्तु रसदमा प्रतिस्पर्धी छौं। हामी तपाईंको गुणवत्ता र रंग जाँच गर्नका लागि नि: शुल्क नमूनेहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
मोटर चालित विन्डो शटर ब्लाइन्ड्स कपडा
Sunetex मोटर चालित विन्डो शटर ब्लाइन्ड्स कपडा राम्रो गुणमा पॉलिस्टरको बनेको छ। समाप्त उत्पाद हाम्रो मुख्य व्यवसाय को एक हो। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न र colorsहरू र फरक चौडाइहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति र राम्रो गुण हुन्छ। हाम्रो कपडाको तेल प्रूफ र वाटरप्रूफ हुन्छ, यसलाई सफा गर्न सजिलो हुन्छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावाइलेशन प्रभाव छ। घर र कार्यालय प्रयोगको लागि उपयुक्त।
Sunetex मोटोराइज्ड विन्डो शटर ब्लाइन्ड्स कपडा हाम्रो मौन अन्धा मध्ये एक हो। यसले तपाईंको शान्त वातावरण राख्न सक्छ। हामी हाम्रो आइटम को लागी १० बर्षे वारेन्टी प्रदान गर्दछौं। र पहिलो सहयोगका लागि हामी तपाईंलाई नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, तिनीहरूलाई उत्पादन गर्न it० दिनको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंको अर्डर सानो छ, चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग तातो बिक्री हुने वस्तुहरूको लागि सामान्य स्टक छ।
रोलर ब्लाइन्ड पर्दा फेब्रिक सेमी ब्ल्याकआउट
Sunetex Jacquard रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा ब्ल्याकआउट श्रृंखला उत्पादनहरू उच्च गुणवत्ताको साथ १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। हामी विभिन्न कोटिंग विधिका साथ जैकवर्ड कपडाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। डबल अनुहार डुबाउने कोटिंग विधिले सेमी ब्ल्याकआउट कपडाहरू, फोम सेतो कोटिंग विधिले ब्ल्याकआउट कपडा बनाउन सक्छ। हाम्रो उत्पादनहरू स्कूल, कार्यालय र घरको लागि उपयुक्त छन्।
हाम्रा उत्पादनहरू तपाईंको जीवनलाई राम्रो बनाउने लक्ष्य राख्छन्। हाम्रो उत्पादनहरू दबाब प्रतिरोध र लामो सेवा जीवन हो, कारीगरी को मामला मा धेरै सावधान छ, छायांकन प्रभाव पनि धेरै राम्रो छ, ढाँचा धेरै राम्रो देखिन्छ, सरल र स्टाइलिश वातावरण, स्थापना गर्न सजिलो। सस्तो मूल्यको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा ग्राहकहरू बीच लोकप्रिय छन्। हामी निःशुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
अर्ध ब्ल्याकआउट विन्डो ब्लाइन्ड कपडा
Sunetex सेमी ब्ल्याकआउट विन्डो कपडा व्हाइट कोटिंग राम्रो गुणमा पॉलिस्टरको बनेको छ। यसले राम्रो छायांकन प्रभाव पार्दछ र प्रभावी रूपमा कडा प्रकाश र पराबैंगनी किरणहरूलाई रोक्न सक्छ। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न र colorsहरू र फरक चौडाइहरू छन्।
हाम्रो कपडा तेल-प्रूफ र वाटरप्रूफ हो, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ, एक पटक सुकाइएपछि। र यसमा सेडि inमा राम्रो क्षमता छ र राम्रो भावावास प्रभाव छ। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, तिनीहरूलाई उत्पादन गर्न it० दिनको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंको अर्डर सानो छ, चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग तातो बिक्री हुने वस्तुहरूको लागि सामान्य स्टक छ। हामी तपाईंको गुणवत्ता र रंग जाँच गर्नका लागि नि: शुल्क नमूनेहरू प्रदान गर्न सक्छौं।
स्लबी यार्न ब्लाइन्ड कपडा डबल फेस डिप कोटिंग
Sunetex Slubby यार्न ब्लाइन्ड कपडा उच्च गुणको साथ १००% पॉलिएस्टर सेमी ब्ल्याकआउट कपडाहरूबाट बनेको छ। हामी तपाईंको विन्डोको लागि २००/२30०/२50०/3०० सेमी विभिन्न चौडाइहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं, र मानक लम्बाई 40० मिटर प्रति रोल हो। हाम्रो उत्पादनहरू कार्यालय, स्कूल र घरको लागि उपयुक्त छन्। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारका कपडाहरू छन्, तपाईं कुनै पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी १ 16 बर्ष भन्दा बढीको लागि ब्लाइन्ड कपडाहरूमा एक पेशेवर निर्माता हो। उन्नत उत्पादन विधिको साथ, हाम्रो उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धी हो, उत्पादन अवधि धेरै छोटो छ। तपाइँलाई हाम्रो उत्तम सामानहरू प्रदान गर्न निश्चित गर्न, हामी हाम्रा उत्पादनहरूको लागि १००% निरीक्षण गर्दछौं। हामीसँग कम MOQ छ, हामीसँग स्टॉक छ भने हामी वितरणको चाँडो व्यवस्था गर्न सक्छौं। हामी wholesales कारखाना हो, हाम्रो उत्पादनहरू राम्रो गुणमा छन् र मूल्य प्रतिस्पर्धी हो। पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
स्मार्ट होम रोलर ब्लाइंड कपड़ा सुपेरियर मध्यम
Sunetex ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपडा शीर्ष गुण र राम्रो वर्णहरूको साथ १००% पॉलिएस्टरले बनेको छ। राम्रो गुणस्तरको पॉलिएस्टर सामग्रीले यसलाई टिकाऊ बनाउन सक्दछ, कुनै मोल्ड, कुनै पतंग, कुनै विरूपण, लामो समय प्रयोग पछि कुनै ट्र्याक। डबल अनुहारको र color्ग गोंद कोटिंग विधिको साथ, यसले प्रकाश र व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षा राख्नमा राम्रो प्रभाव पार्दछ।
हाम्रो उत्पादनहरू दबाब प्रतिरोध र लामो सेवा जीवन हो, कारीगरी को मामला मा धेरै सावधान छ, छायांकन प्रभाव पनि धेरै राम्रो छ, ढाँचा धेरै राम्रो देखिन्छ, सरल र स्टाइलिश वातावरण, स्थापना गर्न सजिलो। हाम्रा उत्पादनहरू तपाईंको जीवनलाई राम्रो बनाउने लक्ष्य राख्छन्। सस्तो मूल्यको साथ, हाम्रा उत्पादनहरू हाम्रा ग्राहकहरू बीच लोकप्रिय छन्। हामी निःशुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
सूर्य शेडिंग रोलर ब्लाइन्ड सेमी ब्ल्याकआउट कपडा
Sunetex सेमी ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपड़ा शीर्ष गुणवत्ता र राम्रो वर्णहरूको साथ पॉलिएस्टरको बनेको छ। हाम्रो उत्पादनहरू राम्रो गुणमा छन्, यो टिकाऊ हो, कुनै मोल्ड, र कुनै पतंग छैन। हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि शास्त्रीय रंगहरू छन्। प्रत्येक वस्तुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ, यो सुन्दर, उदार र विलासी छ। हामी तपाईं बाट छनौट गर्नका लागि २ 300० सेमी र cm०० सेमी सेमिटरको फरक चौडाइ प्रदान गर्न सक्छौं। हाम्रो फेब्रिकको वजन ११ squaregsm प्रति वर्ग मीटर हो, र हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि बिभिन्न प्रकारहरू छन्, तपाईं कसैलाई पनि छान्न सक्नुहुन्छ।
डुबकी-कोटिंग विधिसँग, जसले यसलाई वेंटिलेसन र प्रकाशमा राम्रो प्रभाव पार्दछ। यसले तपाईंलाई शक्ति बचत गर्न सक्दछ। यो स्कूल, घर र कार्यालय प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ। हामी मूल कारखाना आपूर्ति छौं, यदि तपाईं हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं अधिक मार्जिन सक्नुहुनेछ। पहिलो सहयोगको लागि, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
सूर्य सेडि Se्ग सेमी ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा
Sunetex सूर्य सेडि Se सेमी ब्ल्याकआउट रोलर ब्लाइन्ड कपड़ा पॉलिस्टरबाट बनेको छ, हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारका कपडाहरू छन्। वातावरणीय मैत्री कपडाहरू, गैर-विषाक्त र स्वादहीनको साथ अपनाइएको जुन तपाईंलाई आरामदायक वातावरण बनाउँदछ। यो फ्रेन्च विन्डोको लागि उपयुक्त छ। तपाईंसँग फरक स्थापना विधि हुन सक्दछ, जस्तै छत स्थापना, बाह्य स्थापना, साइड स्थापना र यस्तै। तपाईका लागि यो स्थापना गर्न सजिलो छ।
विन्डो पर्दा कपडा १००% पॉलिएस्टर
Sunetex विन्डो पर्दा कपडा १००% पॉलिएस्टर श्रृंखला उत्पादनहरू १००% पॉलिएस्टर उच्च गुणको साथ बनेका छन्। हामी विभिन्न कोटिंग विधिका साथ जैकवर्ड कपडाहरू प्रस्ताव गर्दछौं। डबल अनुहार डुबाउने कोटिंग विधिले सेमी ब्ल्याकआउट कपडाहरू, फोम सेतो कोटिंग विधिले ब्ल्याकआउट कपडा बनाउन सक्छ। हाम्रो उत्पादनहरू स्कूल, कार्यालय र घरको लागि उपयुक्त छन्। तपाईका सन्देशहरुलाई स्वागत छ!
ग्रुपिभ लिमिटेड, १ 16 बर्ष भन्दा बढी बर्षमा ब्लाइन्ड कपडाहरूको व्यवसायिक निर्माता हो। Sunetex हाम्रो कम्पनी मा एक सबै भन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड हो। हामी रोलर ब्लाइन्डहरू, जेब्रा ब्लाइन्डहरू, हनीकम्ब ब्लाइन्डहरू, ठाडो ब्लाइन्डहरू र यस्तै अन्यका लागि कपडा प्रस्ताव गर्दछौं। हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
चीन कारखाना रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा सेमी ब्ल्याकआउट
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड्स कपड़ा हाम्रो तातो बेच्ने उत्पादनहरु मध्ये एक हो। यो उत्तम गुण र उचित मूल्य संग पॉलिएस्टर बाट बनेको छ। तिनीहरू धेरै टिकाउ हुन्, तिनीहरूको जीवनकाल १० बर्ष हुन सक्छ। राम्रो गुण र सबै भन्दा राम्रो सेवा संग, हामी हाम्रो ग्राहकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरु लाई तपाईलाई समर्थन गर्न २h घण्टा सेवा प्रदान गर्दछौं।
हाम्रो कपडा टिकाऊ हो, कुनै मोल्ड, कुनै कीट, कुनै विरूपण, कुनै ट्र्याक लामो समय usag पछि र सजिलै विकृत छैन। हामीसँग कडा गुण नियन्त्रण छ, हामी हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा दोषसहित कपडा हटाउनेछौं। हामी केवल हाम्रो ग्राहकहरु लाई सही कपडा आपूर्ति गर्न को लक्ष्य हो। हामी तपाईंलाई पहिलो सहयोगका लागि नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!
चीन आपूर्तिकर्ता थोक ब्लाइंड कपडा सेमी ब्ल्याकउ
MagicalTex रोलर ब्लाइन्ड कपड़ा पॉलिस्टरबाट बनेको छ, हामीसँग तपाईंको छनौटको लागि विभिन्न प्रकारका कपडाहरू छन्। उन्नत अल्ट्रासोनिक काटि technology टेक्नोलोजीको साथ, किनारमा यसले कुनै बुर बनाउँदैन, धेरै उत्कृष्ट। यो फ्रेन्च विन्डोको लागि उपयुक्त छ। तपाईंसँग फरक स्थापना विधि हुन सक्दछ, जस्तै छत स्थापना, बाह्य स्थापना, साइड स्थापना र यस्तै।
हाम्रो कपडा टिकाऊ हो, कुनै मोल्ड, कुनै कीट, कुनै विरूपण, लामो समय प्रयोग पछि कुनै ट्र्याक छैन र विकृत गर्न सजिलो छैन। हामीसँग कडा गुण नियन्त्रण छ, हामी हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा दोषसहित कपडा हटाउनेछौं। हामी केवल हाम्रो ग्राहकहरु लाई सही कपडा आपूर्ति गर्न को लक्ष्य हो। हामीसँग सानो MOQ छ, यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने, हामी तपाईंको लागि उत्पादनको व्यवस्था गर्नेछौं, र यदि तपाईंको अर्डर सानो छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीसँग तातो बिक्री हुने सामानहरूको लागि सामान्य स्टक छ। हामी तपाईंलाई नि: शुल्क नमूनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौं!